Canon DR-C225 Office Document Scanner | Buy online | SHOP.COM.MM
Canon DR-C225 Office Document Scanner
Canon imageFORMULA DR-C225 ၏ Review အကျဉ်း
ထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းနှင့် ဆန်းသစ်သော featuresများ ပေါင်းစပ်ပြီး စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန် အထူးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ၄င်း၏ ဒေါင်လိုက် J-Path ပုံစံ စကင်ဖတ်သောစနစ်သည် အဆိုပါ DR-C225 ကို အပေါ်ဘက်သို့လည်းကောင်း၊ DR-C225 ၏ အောက်ဖက်သို့လည်းကောင်း ပြန်ထွက်လိုသည့် စက္ကူလမ်းကြောင်းကို နှစ်သက်ရာပုံစံဖြင့် လွယ်ကူစွာ ပြန်လည် ရယူနိုင်သည့် စနစ်ဖြစ်သည်။ ထူသော သို့မဟုတ် ဖောင်းကြွကတ်များ စကင်ဖတ်ရာတွင် ပြန်ထွက်လိုသော စက္ကူ လမ်းကြောင်းကို DR-C225၏ ဘေးဘက်တွင်ပါသော option မှတဆင့် လွယ်ကူစွာ scan ဖတ်ရနိုင်သည်။ အဆိုပါ DR-C225 အသုံးပြုသူများအတွက် စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းကို ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် Capture OnTouch (အလိုအလျောက် စာရွက်များ စကင်ပြုလုပ်ခြင်း)၊ အော်တို Mode ကဲ့သို့သော function ကိုလည်း ထည့်သွင်းထားသည်။ ရိုးရှင်းသော One-touch စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းသည် များပြားလှသော စာရွက်စာတမ်းများ၊ ကဒ်ထူများ၊ ဓာတ်ပုံများကို အချိန် အနည်းငယ်အတွင်း စကင်ဖတ်နိုင်ပါသည်။ DR-C225 တွင် CaptureOnTouch, Bizcard, Omni Page, Paper port, eCopy PDF ဖိုင်ရယူရန် Pro ကို Office နဲ့ Page Manager (Mac) တို့နှင့်အတူ အားလုံးအသုံးပြုနိုင်ရန် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ အသုံးပြုသူများသည် လျင်မြန်စွာဖြင့် Format မျိုးစုံ (PDF ဖိုင်, TIFF, JPEG, BMP, PNG နှင့် PowerPoint) အား ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ တစ်မိနစ်လျှင် စာမျက်နှာ၂၅ မျက်နှာ (ကာလာ၊ အဖြူမည်း) ဖြင့် စကင် ဖတ်နိုင်ပါသည်။ Read more Hide
Canon DR225 Scanner combines quality and speed for easy scanning. Easy to use and can connect with USB. It is also compatible with Windows and Mac. PDF creation and editing can be made. Scan resolution is 300dpi and available for double-sided scan. Its slim and compact design will make light and easy to carry. This product is available now at shop.com.mm online shopping mall.
Dimensions : (H x W x D): 8.7" x 11.8" x 6.1"
Specifications of DR-C225 Office Document Scanner